२. ट्विटर र फेसबुकमै– मोना श्रेष्ठले टिप्पणीका साथमा पोस्ट गरेको एउटा पोस्टर छ, आगामी फेब्रुअरी १४ अर्थात् फागुन २ गते होटल ‘याक एन्ड यति’ मा हुँदै गरेको ‘नेपाल इन्टरप्रेनरसिप समिट’ बारेको । जसमा सहभागीको नाम यसप्रकार छ : पूर्वमन्त्री तथा सांसदहरू सुरेन्द्र पाण्डे, सांसद गगन थापा र सांसद महेश बस्नेत । उद्योगपतिहरू शेखर गोल्छा, उपेन्द्र महतो, पवन गोल्याल, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोखरेल । अर्का सहभागी डा. डीके अग्रवाल जसलाई ‘पीएचडीसीसीआई’ का वरिष्ठ उपाध्यक्ष भनिएको छ, उहाँबारे चाहिं मलाई राम्रोसँग जानकारी छैन । यो छलफललाई सहजीकरण गर्दै छन् टेलिभिजन प्रस्तोता टीकाराम यात्री । आजसम्म यो भियाग्रा क्लबमाथि कुनै हरेफेर वा परिवर्तन भएको जानकारी कम्तीमा मैले देखेको छैन । सांसद थापालाई मेन्सनसमेत गरिएको उक्त ट्विटमा थापाको कुनै सार्वजनिक प्रतिक्रिया पनि देखिएको छैन ।
३. गत माघ २२ गते पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा प्रदेश चारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आयोजना गरेको र प्रदेशका मन्त्री विकास लम्सालसमेत उपस्थित विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान स्थापनासम्बन्धी एउटा ‘प्रारम्भिक छलफल’ कार्यक्रम रैछ । नजिकै बस्ने भएकाले त्यहीं छलफलमा पुगेका दुई जना साथी हिमालखबरका युवराज श्रेष्ठ र ‘लिबर्ड’ की मीरा ढकालले मलाई पनि ‘आऊ’ भनेर फोन गरेपछि म जसलाई कुनै औपचारिक निम्तो थिएन, केही ढिला पुगें । लिबर्डको प्रतिनिधित्व गरिरहेकी एक जना मीराबाहेक सहभागी सबै पुरुष थिए । उपस्थित अधिकांश पुरुष प्राध्यापक कक्षाकोठामा विज्ञान विषय पढाइरहेका व्यक्ति नै थिए । ‘उल्कै’ क्रान्तिकारी वैज्ञानिक वा अनुसन्धाता थिएनन् । कम्तीमा मैले चिनेका केही प्राध्यापकमध्ये त त्यस्ता ‘उल्कैका’ वैज्ञानिक कोही थिएनन् । जानेसाथ मेरो आँखा त्यही कुरामा प‍र्‍यो र मैले साथीहरूलाई ‘महिला रहेनछन्’ भनें । विज्ञान संकायमा पढाउने दुई–तीन जना महिला प्राध्यापकलाई त मै व्यक्तिगत रूपमा चिन्छु । जब त्यो उल्कै ‘वैज्ञानिक’ हरूको भेला थिएन भने कक्षाकोठामै पढाउने विज्ञान संकायका पुरुषलाई बोलाउन हुने, उही काम गरिरहेका महिलालाई बोलाउन किन नहुने ? यसबाट उनीहरूलाई मान्छेको रूपमा गणना नगरेर नबोलाइएको हो भन्नेबाहेक अरू के निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ ?